India: Ny Fitondran’ireo Taranakà Mpanao Pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2018 20:56 GMT
Mbola velona ve ny demôkrasia? Izany no fanontaniana mbola mitoetra anatin'ny lalao pôlitika ataon'ity zana-tanibe ity momba ny fandovàna. Nanana ny mpanjakanay sy ny mpanjakavavinay izahay, saingy mbola tsy afa-mitsahatra manompo ireo mpanjaka ara-pôlitika vaovao sy ny fianakavian-dry zareo izahay. Maty nisy namono ny vehivavy iray mpitarika tao Pakistàna ny 27 Desambra 2007 ary ora vitsy taorian'ny nandaozany ny fiainany ara-pôlitika sy ara-batana, nofidina handimby azy ny zanany lahy. Manontany i Sirensongs, avy ao amin'ny ‘Feringhee: Ny Diarin'i India‘.
“Rahoviana ny demôkrasia no tsy azo atao hoe demôkrasia? Rehefa tendrena amin'ny fomba tsy demôkratika ny filoha mitondra, ohatra. Rehefa mahakasika ny fandovam-pahefana ny 9/10 amin'ny lalàna; eny, manaraka izany koa ny Gandhi-Nehrus sy ny Thackerays ao India, sy ireo maro hafa. “
Mamerina ny teny avy amin'ny Indian Express i Sirensongs milaza fa: “Novaina ho demôkrasia ny fitondram-panjaka tany Azia Atsimo.” Mamolavola ny tenantsika ho repoblikana isika rehefa nanome lamosina ny fitondran'ny mpanjaka. Kanefa matetika, tsy vanona sy marefo izany fisainana repoblikana izany, satria karazanà fitondran'ny mpanjaka kely izay samy manana ny fianakavian'ny mpanjakany ny antoko pôlitika ao amin'ny governemanta demôkratikantsika. “ Arahany amin'ny fijeriny manokana izany.
Ao amin'ny India View, tsy miraika amin'ny toedraharaha pôlitika ao Azia Atsimo i S. Venikar, nefa mangoraka ny printsy ‘Bilawal’ sy ny lovany.
“Tsy hisy fanontaniana mipetraka raha toa ka manomboka mamindra ny fananany amin'ny filazàna ny faniriany farany ny mpitarika pôlitika ao amin'iny firenena, na dia mety ho voasedra ara-dalàna aza izany faniriana farany izany. Raha manendry ny mpandova azy ny Mpanjakalahy sy Mpanjakavavy amin'ny taonjato faha-21, mety ho azo takarina ihany izany.
Tena tsy misy fombafomba na fifanarahana mihitsy ho anà tranga toy izao ao amin'ny lalàmpanorenana na ao anatin'ireo antoko pôlitika. Manaiky tsy sazoka ny kiantranoantrano mandritra ny androm-piainan'ireo mpitarika pôlitika ny mpanara-dia azy ireo. Azo raisina ho toy ny mpandova ny toeran'ny mpitarika anatin'ny antoko tsirairay misy azy ireo izy ireo i Bilawal Bhutto, Rahul Gandhi ary Pankaj Singh rehefa any aoriana any,
Fanehoana rariny ny alahelo sy fisaonan-jatovo ilay fanambaràna mafonja nataon'i Bilawal momba ny finoany ny demôkrasia sy ny famaliany faty ny famonoana ny reniny amin'ny alàlan'ny demôkrasia, saingy indrisy fa tsy hitany ny fanodikodinana ny demôkrasia ao amin'ny antoko pôlitikany. “
Anatinà lahatsoratra nivoaka teo aloha, mitondra ny lohateny hoe “De'mo-narchy Of India”, miteny i Venikar fa ireo mpanao pôlitika vaovao izay manararaotra ny fametrahana ny demôkrasia hamoronana fitondranà taranakà mpanao pôlitika no tena tokony hatahorana hanimba ny demôkrasia Indiana.
Matahotra i Patrick Pringle noho ny fitoviana misy eo amin'ny olana iainan’i Bilawal, zanak'i Bhutto, sy ny an'i Gandhi. Maneho ny heviny momba ity olana mihitatra ity avy any Londona izy ao amin'ny bilaoginy Patrick's South Asia Diary (rohy tsy mandeha).